बाजुराका मतदाता भन्छन् - ‘चिसो बढ्यो बेसीमा भेडा पाल्ने कि लेकमा भोट हाल्ने ?
Sat, Jun 23, 2018 | 04:19:47 NST
17:37 PM (7months ago )
बाजुरा, कात्तिक २८ – हिमाली गाउँपालिका-२ बौडीगाउँका पुरन थापा उनका परिवारसहित भेडाबाख्राको बथानसँगै सदरमुकाम मार्तडी हुँदै अछामको बुढाबगरको यात्रामा हिँडेका छन् ।
उनी मात्र गाउँबाट हिँडेका होइनन् । गाउँका ३५ परिवार पनि उनीसँगै घरबाट हिँडेका छन् । गाउँमा चिसो बढेसँगै भेडा बाख्रालाई चरन नभएपछि उनीहरु बेसीतिर झरेका हुन् । पहिलो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि चुनाव नजिकिँदै जाँदा बाजुराका हिमाली क्षेत्रका भोटे जनजाती र भेडा पालक कृषकहरु बेसीतिर झर्न थालेका छन् ।
पुरन थापा भेडाहरु रोकेर बुढीगंगाको बगरमा बिहानको खानाको प्रबन्ध मिलाउँदै थिए । उनकी श्रीमती पानीको प्रबन्ध गर्न खोलातिर जाँदै थिइन् । ‘भोट हाल्न फर्केर घर जाने होइन ?’ भनेर सोध्दा पुरनले भन्नुभयो ‘जाँदैनौं ! गाउँमा कोही छैन । चिसो बढेको छ । हामी फर्कीयौं भने हाम्रा भेडा बाख्रा कसले हेरिदिन्छ ?’ उनीहरु परीवारसँगै भेडाबाख्रा पाल्न ६ महिनाका लागि घरबाट निस्केका रहेछन् ।
थापा बसेको डाँडोभन्दा पल्लो डाँडाको खोचमा झण्डै दश परिवार आफ्ना भेडाबाख्रासँगै भेटिए । उनीहरु बुढीनन्दा नगरपालिका ४ का बासिन्दा रहेछन् । समूहमा बेसीतिर झरेका उनीहरु बिहानको खानाको जोहो गर्दै थिए । त्यसमध्येका एक जना बुद्वी बोगटीलाई मत नहाली किन बेसी झर्नु भएको भन्दा ‘फुर्सद छैन, यतिको सम्पतीको माया मारेर भोट मात्र हालौं भने हाम्रो भलो हुँदैन’ भन्नुभयो । उनीहरु मात्र बेसी झरेका होइनन् । गाउँका सबै मानिसहरु दुई तीनदिनदेखि बेसी झर्न थालेका छन् । गाउँमा जम्मा ४८ घरधुरी छ । १० घरपरिवारमा भेडा छैनन् । उनीहरु गाँउमा बसे पनि अरु सबै भेडाहरुसँग बेसी झरेको बोगटीले बताउनुभयो ।
अहिले बाजुरा जिल्लाका सबै राजनीतिक दलहरु आफ्नो गठबन्धनलाई विजयी गराउन मतदाताको घर दैलोमा पुग्ने समय हो । तर जिल्लाका हिमाली क्षेत्रका भेडापालक किसान भने भेडा पाल्न औल (बेसी) तिर झरेका छन् । भेडाहरु चिसोमा पाल्ल नसकिने भएपछि आफूहरु भोट हाल्नको लागि नफर्कने कुरा पाण्डुसैनका सुरत थापाले बताउनुभयो ।
अहिले चुनावको चहलपहल हुनुपर्ने हो । तर बर्षायामको बालि भित्र्याएर हिमाली गाउँपालिका, स्वामीकार्तिक गाउँपालिका र बुढीनन्दा नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भोटे जनजातीहरु आफ्ना भेडा बाख्रा र घरपरिवारसँगै बेसीतिर झरेको रमाइलो दृष्य देखिन्छ ।
हिउँले घाँस छोप्ने भएका कारण हिमाली क्षेत्रतिर बसोबास गर्ने भोटे र भेडापालक सबै किसानहरुले हरेक हिउँद याममा बाजुराको दक्षिणी क्षेत्र अछामबाट डोटीका हिउँ नपर्ने क्षेत्रतिर भेडा बाख्रा चरीचरनका लागि आउने गरेका छन् । चुनावसम्म गाउँमै बस्ने हो भने भेडा बाख्रालाई चराउनको लागि ठाउँ नै हँुदैन । एक भोट हाल्नको लागि आफ्नो सबै सम्पतीको नास हुने बताउनुहुन्छ स्थानीय पासाङ्ग गुरुङ ।
गाउँमा घर कुर्ने मान्छे बाहेक अरु सबै बेसीतिर झरेका छन् । स्थानीय तहको चुनावमा ८१ प्रतिशत मतदान भएको बाजुरा जिल्लामा यस पटकको चुनावमा मतदाताहरु विभिन्न कारणले मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था आएको छ ।
बाजुरा जिल्लामा प्रतिनिधिसभाको लागि एक निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभाको लागि दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको बाजुरा जिल्लामा रहेका ६९ हजार ८ सय ३४ जनाले मताधिकार प्रयोग गर्नको लागि ६९ मतदान स्थल र एक सय मतदान केन्द्रको ब्यवस्था गरीएको छ ।